Umaki: ukuphindisela | Martech Zone
Ngenkathi ngicwaninga ngesihloko sokukhangisa, kwenzeke i-infographic yokuthi Ukukhangisa Kusenza Sithenge Kanjani. I-infographic engezansi ivula ngombono wokuthi izinkampani zicebile futhi zinenqwaba yemali futhi bayisebenzisela ukuphatha izethameli zabo ezihluphekayo. Ngicabanga ukuthi lowo ngumbono ophazamisayo, oneshwa, futhi ongalindelekile. Umbono wokuqala wokuthi izinkampani ezicebile kuphela ezikhangisa ngumqondo ongajwayelekile. Inkampani yethu ayicebile futhi, empeleni, yayinezithandani
NgoLwesibili, Septhemba 2, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Bengizwakalisa ukungazinaki kwami ​​nge-panacea yakamuva yokuthi ukumaketha okunamandla kuthengiswa kanjani online. Yize ngikholwa ukuthi abathonya banamandla amakhulu futhi banethonya elithile, angikholwa ukuthi banamandla okukholisa azimele kwezinye izinto. Ukumakethwa komthelela kusadinga isu elingaphezulu kokuphonsa amanye amathikithi kumuntu onamandla noma ukuthola i-retweet. Ngokusho kukaDkt Robert B. Cialdini, umbhali we-Influence: Science and Practice (5th Edition), ngingahle
I-Social Buzz Club: Yabelana futhi Wabelane
ULwesine, April 18, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Enye yezinto ezinhle zokuhambela ingqungquthela efana neSocial Media Marketing World ukuthi ushiya ukunethezeka kwenethiwekhi yakho bese ufaka abanye abaningi. Akunandaba nosayizi wenethiwekhi yakho, uvame ukukhawulelwa kuzindaba nolwazi olwabiwe ngaphakathi. Ukuya engqungqutheleni yomhlaba efana nalena kukuvulela amanethiwekhi amasha kakhulu. Sihlangane nabantu abaningi eSan Diego futhi sizoqhubeka
Ividiyo: Isayensi Yokuthonya
Lwesibili, Disemba 4, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Enye ye-infographics ethandwayo esanda kuyithumela kwakuyizindlela eziyi-10 zokuguqula izivakashi ezinePsychology. Ukuqonda ukuthi yini eholela umuntu ekuthengeni kubalulekile kumakethi. Uma unganikeza imininingwane edingekayo, ungaba nomthelela esinqumweni sokuthenga. Le vidiyo i-infographic evela kubalobi be-Yebo! Izinqamuleli zomhlaba wonke ezichazwe kuvidiyo zingukuphindisela,
Ubuntu kanye Nokuthembela Kubhulogi
NgoLwesine, ngo-Okthoba 30, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngibheke izindaba namuhla futhi kunezinkulumo eziningi ngombono osontekile wezepolitiki nokuthi umfakisicelo ngamunye wethulwe futhi waphenywa kanjani. Imidiya yezindaba isabamba iqhaza elikhulu okhethweni futhi, njengoba sibona izigidi zamadola ziphonswa ekukhangisweni kwethelevishini. Ukhetho olungcolile futhi engizojabula ukubona ukuphela kwalo kungekudala. Okugqamile kulo mkhankaso kube yiwona